Firaisamonina sivily MSIS-tatao : misy ny tetikasa fampangaraharana ny tetibolam-panjakana | NewsMada
Firaisamonina sivily MSIS-tatao : misy ny tetikasa fampangaraharana ny tetibolam-panjakana
Par Taratra sur 25/03/2016
Mankaiza ny volam-bahoaka? Tetibolam-panjakana… Tsy fantatra na tsy mazava amin’ny ankamaroan’ny olom-pirenena. Misy ny tetikasa amin’ny fampangaraharana ny tetibola.
Fampiharana ny fangaraharana amin’ny tetibola. Izay ny tetikasa iarahan’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola amin’ny fiarahamonina sivily, fikambanana Multi-sector information service-tohana sy ainga ho an’ny tambajotran’ny olom-pirenena (MSIS-tatao). Eo amin’ny tondro-marika ny tetibola misokatra, taona 2015, ny tetikasa, izay nampahafantarina teny Antaninarenina, omaly, ny fanombohana ofisialy. Mamatsy vola izany ny Vondrona eoropeanina: 48 965 euros.
“Miezaka hampangarahara ny fandehan’ny tetibola ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny vola. Eo amin’ny famolavolana izany ka hatramin’ny fankatoavana ny fandaniam-bolam-panjakana”, hoy ny tale jeneralin’ny tetibolam-panjakana, Razanajato Mialy. Mandray anjara amin’ny famolavolana tetibolam-panjakana izao ny minisitera, ny andrimpanjakana, ny sehatra tsy miankina, ny firaisamonina sivily, ny faritra.
Mila fanatsarana ny sosialim-bahoaka
“Fiaraha-miasa mba hametrahana ny fangaraharana amin’ny famolavolana sy fanatanterahana ary ny fanaraha-maso ny tetibolam-panjakana”, hoy ny tale jeneralin’ny MSIS-tatao, Andriamoraniana Harijaona. Ao anatin’izany ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny firaisamonina sivily hanao fanaraha-maso ny famolavolana sy fanatanterahana ny tetibola. Hisy koa ny fanaovana tombana ny amin’izany, ny fanara-maso any amin’ny faritra na kaominina 20 eo ho eo izay ampiharana ny tetikasa.
Anisan’ny tokony homen-danja amin’ny tetibola, ohatra, ny fampianarana, izay mbola mandringa eto amintsika. Tokony ho 20% amin’ny tetibolam-panjakana izany, nefa 17% mahery kely ny taona 2016; ny tetibola ho an’ny fahasalamana, tokony ho 12 % na 15 %, nefa mbola latsaky ny 10 % izany. Miezaka ny firaisamonina sivily izay manana ny antontanisa, mandresy lahatra ny fitondram-panjakana foibe mba hanatsara izay salanisa izay ho an’ny sosialim-bahoaka.
Tanjona: mba hihatsara ny fangaraharana amin’ny famolavolana tetibolam-panjakana ary hampandray anjara ny firaisamonina sivily amin’izany ny fanjakana. Tsy misy afa-tsy 14,38% ihany, ohatra, ny fangaraharan’ny fandoavan-ketra tamin’ny taona 2013 sy ny tany aloha.
Andekaleka: les équipements en cours de séchage 20/01/2022
Autonomisation des jeunes femmes: une priorité pour l’ONG MWA 20/01/2022
Titre Vert dans la région Vakinankaratra: les bénéficiaires en pleine exploitation 20/01/2022
Dans le cosmos 20/01/2022
Interfilm : un appel à films courts 20/01/2022